Mohamed bin Nayef oo caddeeyey mowqifkiisa xilkii dhaxal-suge ee laga qaaday | Arrimaha Bulshada
Home News Mohamed bin Nayef oo caddeeyey mowqifkiisa xilkii dhaxal-suge ee laga qaaday
Mohamed bin Nayef oo caddeeyey mowqifkiisa xilkii dhaxal-suge ee laga qaaday
Thursday, June 22, 2017 News Edit
Bulsha:- Dhaxal-sugihii hore ee boqortooyada Sacuudiga Mohammed Bin Nayef, ayaa taageeradiisa u ballan qaaday dhaxal-sugaha cusub ee lagu beddelay Mohammed Bin Salman oo ah wiilka boqor Salman Bin Abdul Aziz.
Wareegto kasoo baxday boqortooyada ayaa arbcadii xilka dhaxal-suge looga qaaday Mohammed Bin Nayef oo ah 57 jir uu adeer u yahay boqor Salmaan, waxaana beddelay Mohammed Bin Salman oo 31 jir ah, kaasi oo horey u ahaa ku xigeenka dhaxal-sugaha.
Muuqaal uu baahiyey taleefishinka qaranka Sacuudiga ayaa muujiyey Mohammed Bin Salman oo salaamaya Mohammed bin Nayef, kuna leh “weligey kama tagi doono taladaada”.
Mohammed Bin Salman ayaa sidoo kale sii ahaan doona wasiirka gaashaandhigga, isaga oo dushana kala socon doona dadaallada isbedellada loogu sameynayo dhaqaalaha dalkaas.
Mohammed bin Salman oo ahaa ku xigeenka dhaxal-sugaha, ayaa sidoo kale iminka noqon doona ra’iisul wasaare ku xigeenka Sacuudiga.
Wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa sheegtay in is-beddellada la sameeyey ay ansixiyeen 31 ka mid ah 34-ka xubnood ee golaha baayacada ee boqortooyada Sacuudiga.
Dhaxal-sugihii hore, islamarkaana uu adeer u yahay boqor Salman, Mohammed bin Nayef ayaa laga qaaday dhammaan xilalkii uu hayey, oo uu ku jiro wasiirkii arrimaha gudaha, sida digreetada lagu sheegay.